ပင်မစာမျက်နှာ > Nicotinamide Riboside Chloride အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
သင်ဟာသက်သတ်လွတ် Nicotinamide ကိုရှာနေတယ်ဆိုရင် Riboside ကလိုရိုက် ဖြည့်စွက်ရန်, ငါတို့ Cofttek Nicotinamide Riboside ဖြည့်စွက်အကြံပြုပါသည်။ ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီသည်နီကိုတင်မိုင်ရိုင်ဘိုက် (S) ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုသာရောင်းဝယ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သောဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများသည်အရည်အသွေးအလွန်မြင့်မားသည်ကိုစိတ်ချနိုင်သည်။ The Cofttek Nicotinamide Riboside ဖြည့်စွက်ဆေးသည်မျိုချရန်လွယ်ကူသောဆေးတောင့်များပါ ၀ င်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်တစ်နေ့လျှင်တစ်တောင့်ကိုသာသောက်ရမည်။
သို့သော်၊ အကယ်၍ သင်သည် gluten၊ egg, BPA, nuts, preservatives နှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်းကင်းသောထုတ်ကုန်များကိုသင်ရှာဖွေနေပါကသင်၏ငွေကို Cofttek Nicotinamide Riboside ဖြည့်စွက်ချက်တွင်ထည့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ NR ကို flavonoids နှင့်ပေါင်းစပ်သည်။ အတူတူ, ဒီနှစ်ခု sirtuin လှုပ်ရှားမှုမြှင့်တင်ရန်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ Cofttek က ၄ င်းကို ၄ င်း၏ဖြည့်စွက်မှုတစ်ခုစီအတွက်စစ်ဆေးမှု ၄ ကြိမ်ပြုလုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကုမ္ပဏီ၏ဖြည့်စွက်ဆေးများသည်လုံးဝလုံခြုံစိတ်ချရသည်။ ထို့အပြင်ဤဖြည့်စွက်ချက်များကို cGMP အသိအမှတ်ပြုစက်ရုံတစ်ခုနှင့် TGA အသိအမှတ်ပြုစက်ရုံတစ်ခုတွင်ထုတ်လုပ်သည်
Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက် FAQ
nikotinamide riboside chloride ဆိုတာဘာလဲ။
Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်သို့မဟုတ် Niagen သည် NAD + ရှေ့ပြေးဗီတာမင်ဖြစ်သော Nicotinamide Riboside ၏ကြည်လင်သောပုံစံဖြစ်သည်။ Nicotinamide Riboside သည် 255.25 g / mol အလေးချိန်ရှိသော်လည်း Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်အလေးချိန် 290.70 g / mol နှင့် Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက် 100 မီလီဂရမ် Nicotinamide Riboside ၏ 88 မီလီဂရမ်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ NR ကိုအစားအစာများတွင်အန္တရာယ်ကင်းစွာထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။
သော်လည်း Nicotinamide Riboside ၎င်းသည်ဗီတာမင် B3 အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများသည်၎င်းကိုနီကိုတင်းနိုက်နှင့်နီအိုကင်းကဲ့သို့သောဗီတာမင် B3 အုပ်စုရှိအခြားသူများနှင့်များစွာကွဲပြားခြားနားစေသည်။ Niacin သည် GPR109A G-protein coupled receptor ကို activate လုပ်ခြင်းဖြင့်အရေပြားကို flush ဖြစ်စေသည်။ Nicotinamide Riboside သည်ဤ receptor နှင့်လုံး ၀ မသက်ဆိုင်သောကြောင့်တစ်နေ့လျှင် ၂၀၀၀ မီလီဂရမ်ပမာဏမြင့်မားသောပမာဏ၌ပင်အရေပြားဖြန်းခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ ထို့အပြင်ကြွက်များတွင်ပြုလုပ်သောစမ်းသပ်မှုများအရ Nicotinamide Riboside သည် NAD + ရှေ့ပြေးဖြစ်ကြောင်းခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ Nicotinamide Adenine Dinucleotide သို့မဟုတ် NAD + တို့တွင်အမြင့်ဆုံးမြင့်တက်မှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
Nicotinamide Riboside သည်သဘာဝအစားအစာများတွင်တွေ့ရပြီးခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌ NAD + သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်လုပ်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးအတွက်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနပြုချက်အရ NR မှထောက်ပံ့ပေးသော Nicotinamide Riboside Chloride (သို့) NAD + သည် mitochondrial function ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးအင်ဆူလင် sensitivity ကိုခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ oxidative ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုထိန်းညှိရန်တာဝန်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အဘယ်ကြောင့် Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်လိုအပ်သည်
အလှကုန်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းသည်ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီသောစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အိုမင်းဆေးတိုက်ခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်သောသုတေသနသည်အချိန်တိုအတွင်းထိုကဲ့သို့သောမယုံနိုင်လောက်အောင်တိုးတက်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစုကြီးများသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အစဉ်အမြဲနုပျိုသောစိတ်ဆန္ဒမှရရှိသောငွေများရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်အဖွဲ့များ ဖွဲ့၍ အသားအရေအားတက်ကြွစေနိုင်သောပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ထုတ်ကုန်များကိုရှာဖွေရန်နေ့နှင့်ရက်သတ္တပတ်များစွာကိုရှာဖွေကြသည်။ Nicotinamide Riboside သို့မဟုတ် Niagen သည်အိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုတားဆီးသောထုတ်ကုန်များကိုရှာဖွေခြင်းကြောင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ Anti-aging products အများစုသည်အရေပြားမှအိုမင်းခြင်းလက္ခဏာကိုအနည်းဆုံးဖြစ်သော်လည်း Niagen သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအိုမင်းခြင်းလက္ခဏာများကိုအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ Nicotinamide Riboside သို့မဟုတ် Niagen သည် Nicotinamide Riboside Chloride ၏ကြည်လင်သောပုံစံဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌ NAD + အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးကျန်းမာသောအိုမင်းခြင်းနှင့်အခြားသောအရေးကြီးသောလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
ယခုအထိပြုလုပ်ခဲ့သည့်လေ့လာမှုများစွာအရ Nicotinamide Riboside သုံးစွဲမှုသည်တစ်နေ့လျှင် ၁၀၀၀ မှ ၂၀၀၀ မီလီဂရမ်အထိလူတို့၏သုံးစွဲမှုအတွက်ဘေးကင်းပါသည်။ သို့သော်ဤinရိယာတွင်ပိုမိုတိကျသောလေ့လာမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သောကြောင့်နီကိုတင်းနိုက်ဒီဘီရိုဘိုက်ထုတ်လုပ်သူများသည်နေ့စဉ်နေ့စဉ် NR ပမာဏကို ၂၅၀-၃၀၀ မီလီဂရမ်အောက်တွင်ထားရှိရန်အကြံပြုသည်။
Nicotinamide Riboside (သို့) Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်သုံးစွဲမှုဟာအန္တရာယ်ကင်းသော်လည်း၎င်းသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်သည့်ပျို့ချင်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အစာကြေခြင်း၊ NR ဖြည့်စွက်ဆေးကိုသောက်နေစဉ်ဤရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုကိုသင်တွေ့ကြုံခံစားရပါကသင်၏ဆရာဝန်နှင့်ချက်ချင်းတိုင်ပင်ပါ။ ထို့အပြင်၊ Nicotinamide Riboside သည်ကိုယ် ၀ န်နှင့်နို့တိုက်နေသည့်အမျိုးသမီးများအပေါ်သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လုံလောက်သောသက်သေအထောက်အထားမရှိသောကြောင့်ဤအုပ်စုသည် Nicotinamide Riboside ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။
သို့သော်မကြာသေးမီကလေ့လာမှုများအရခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ NAD + တိုးများလာခြင်းကခန္ဓာကိုယ်၏ဆယ်လူလာလုပ်ငန်းကိုအချိန်ပြန်လှည့်သွားသကဲ့သို့ပြန်လည်ထူထောင်ပေးနိုင်သည်၊ အမှန်ကတော့ NAD + ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့အဆင့်ကိုပြန်ရရင်ယောက်ျားတွေကအိုမင်းခြင်းကိုပြောင်းပြန်လုပ်နိုင်တယ်။
NAD + ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ NAD + ထိုးသွင်းမှုသည်ဒေါ်လာ ၇၄၉ မှ စတင်၍ MIVM Cocktail မှပါဝင်ပစ္စည်းများကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ Mobile IV Medics NAD + MIVM ကော့တေးသည်ဒေါ်လာ ၉၉၉ ဖြစ်ပြီးဤဇိမ်ခံကုသမှုတွင်မဂ္ဂနီစီယမ်ကဲ့သို့သောဗီတာမင်များနှင့်အာဟာရများပါ ၀ င်သည်။
C&T မဂ္ဂဇင်းအကြံပေးတစ် ဦး ကဤသို့သဘောတူသည် -“ NAD + သည်ဆယ်လူလာဇီဝြဖစ်ပျက်မှုတွင်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်အရေပြားဆဲလ်စွမ်းအင်ကိုတိုးမြှင့်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်အလှကုန်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းသို့ ၀ င်ရောက်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အိုမင်းနေသောဆဲလ်ဆဲလ်တစ်ခု၏အရေပြားစွမ်းအင်ကိုတိုးပွားစေပါက၎င်းသည်နုပျိုသောဆဲလ်တစ်ခုနှင့်ပိုမိုအလုပ်လုပ်ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောအသားအရေကိုထုတ်လုပ်ပေးလိမ့်မည်။
သူက“ ၁၂ လကျော်လောက်အကြာမှာ NMN ကိုကြွက်တွေကို NMN ပေးတာကအိုမင်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းကပြသခဲ့ပါတယ်။ Imai ၏အဆိုအရရလဒ်များကိုလူသားများသို့ဘာသာပြန်ခြင်းသည် NMN သည်လူတစ် ဦး အားအသက် ၁၀ မှ ၂၀ နှစ်အကြားရှိဇီဝြဖစ်စဉ်ကိုပေးနိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။
nad သည်ဗီတာမင် B3 လား။
Nicotinamide Riboside ဆိုတာဘာလဲ။ Nikotinamide riboside, or niagen, သည် niacin ဟုလည်းခေါ်သည့်ဗီတာမင် B3 ၏အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားဗီတာမင် B3 ကဲ့သို့ပင် nikotinamide riboside ကိုသင့်ခန္ဓာကိုယ်က nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +), coenzyme သို့မဟုတ် helper molecule အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသည်။
nicotinamide သည် Vitamin B3 နှင့်အတူတူလား?
Niacin (ဗီတာမင် B3 ဟုလည်းလူသိများ) သည်ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သောဗီတာမင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Niacin သည်နီကိုတင်းအက်ဆစ် (pyridine-3-carboxylic acid)၊ nikotinamide (niacinamide သို့မဟုတ် pyridine-3-carboxamide) နှင့်နီကိုတင်းနိုက်ရိibosideကဲ့သို့သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက်ယေဘူယျအမည်ဖြစ်သည်။
ငါ niacinamide ကိုနေ့တိုင်းသုံးလို့ရပါသလား။
လူအများစုကကောင်းကောင်းခံနိုင်ရည်ရှိသဖြင့်တစ်နေ့လျှင် ၂ ကြိမ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဆောင်းရာသီတွင်အေးခဲ။ ခြောက်သွေ့သောရာသီဥတုနှင့်ဗဟိုအပူကိုမကြာခဏသုံးသောအချိန်များတွင်အထူးသင့်တော်သည်။ သင်၏ retinol ကုသမှုကိုမစတင်မှီနှင့်၎င်းနှင့်အတူတွဲဖက်သုံးပါ။
Niacinamide သည်ဆံပင်ရှည်ရှည်စေခြင်းနှင့်လည်ပတ်ခြင်းအားကောင်းစေခြင်းကြောင့်ဆံပင်ကိုကြီးထွားစေသည့်အဓိကအခန်းကဏ္ has မှပါ ၀ င်သည်။ ဆံပင်၏အသွင်အပြင်နှင့်ခံစားမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးခန္ဓာကိုယ်၊ ၎င်းသည် Keratin တည်ဆောက်ရန်ကူညီခြင်းဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာထိခိုက်ပျက်စီးစေသောဆံပင်၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်းတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။
niacinamide (သို့) ဗီတာမင်စီဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ။
ထို့အပြင် "ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ဗီတာမင်စီသည်ထိရောက်မှုရှိစေရန် pH နိမ့်ဆုံးတွင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပြီး၊ နီယာကင်နိုက်သည်ပိုမိုမြင့်မားသော / ကြားနေသော pH တွင်ပိုမိုအလုပ်လုပ်သည်" (၎င်း၏ပျော့ပျောင်းသောသဘောသဘာဝသည်ဗီတာမင်စီထုတ်ကုန်များစွာသည်အဖိုးမဖြတ်နိုင်သည့်ဘက်တွင်ယိမ်းယိုင်နေရသည်။ ၎င်းသည်ဖော်စပ်ရန်ခဲယဉ်းသည့်အရာဖြစ်သည်။ )
Niacin သည်ပျော့ပျောင်းသောမှအလယ်အလတ်သွေးရည်ကြည် aminotransferase မြင့်တက်ခြင်းနှင့်မြင့်မားသောဆေးများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အချို့သော niacin ၏ဆေးဝါးများသည်ပြင်းထန်သည့်အပြင်သေစေနိုင်သောပြင်းထန်သည့်အသည်းဒဏ်ရာနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
Niacinamide သည်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်။ ၎င်းသည်နှင်းခူ၊ ဝက်ခြံနှင့်အခြားရောင်ရမ်းအရေပြားအခြေအနေများမှအနီရောင်ကိုသက်သာစေသည်။ ပေါက်အသွင်အပြင်ကိုလျော့ချပေးသည်။ အသားအရေကိုချောမွေ့စွာစိုစွတ်အောင်ထိန်းထားခြင်းသည်ဒုတိယအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီးအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပေါက်အရွယ်အစားကိုသဘာဝလျော့ကျစေသည်။
10% niacinamide လွန်းပါသလား
Niacinamide သည်နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကိုကုသခြင်း၊ ပြိုကွဲခြင်းမှကာကွယ်ရန်နှင့်ကောင်းမွန်သောလိုင်းများနှင့်အရေးအကြောင်းများကိုတိုးတက်ခြင်းအားဖြင့်သင့်အသားအရေကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။ Nicinamide ဆေးများသည် ၁၀% အထိမြင့်တက်နေသော်လည်းလေ့လာချက်များအရ ၂% အထိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
niacinamide အလုပ်လုပ်ရန်ဘယ်လောက်ကြာပါသလဲ။ niacinamide နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုအများစုက ၈-၁၂ ပတ်အကြာမှာရလဒ်တွေကိုပြသပေမယ့်သင်အကျိုးသက်ရောက်မှုအချို့ကိုချက်ချင်းသတိထားမိလိမ့်မယ်။ ၅% niacinamide ပါဝင်သောထုတ်ကုန်များကိုရှာဖွေပါ။ ၎င်းသည်မည်သည့်ဒေါသကိုမှမဖြစ်စေဘဲခြားနားချက်ကိုထင်ရှားစွာပြသရန်သက်သေပြခဲ့သောရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။
Niacinamide သည်ဆဲလ်များအတွင်း melanosome လုပ်ဆောင်မှုကိုတည်ငြိမ်စေနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်ဝက်ခြံအမာရွတ်များနှင့် melasma ဝေဒနာခံစားနေရသူများ၏ကျန်ရှိသော hyperpigmentation ကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။
ဗီတာမင် B5 သည်သင်၏အရေပြားအတွက်ဘာလုပ်သနည်း။
Pro-Vitamin B5 သည်အသားအရေကိုနူးညံ့ချောမွေ့စေပြီးကျန်းမာစေပါသည်။ ၎င်းသည်သင့်အရေပြား၏အနာပျောက်စေသောဖြစ်စဉ်များကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည့်ရောင်ရမ်းခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုလည်းရှိသည်။ နက်ရှိုင်းစွာရေဓါတ်ဖြည့်ပေးပြီးအရေပြားကိုလေထဲမှအစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူခြင်းဖြင့်အေးဆေးငြိမ်စေသည်။
ကျွန်ုပ် NAD ကိုမည်သို့တိုးပွားစေနိုင်သနည်း။
အစာရှောင်ခြင်းနှင့် ketosis အစားအစာများ
ရလဒ်အနေဖြင့်ပါးစပ် NAD ဖြည့်စွက်ဆေးများသည် ၄ ​​င်းတို့ကိုစုပ်ယူမှုနှုန်းနိမ့်သောကြောင့် IV ပြုတ်ရည်ထက်ထိရောက်မှုနည်းသည်။ ခံတွင်းဖြည့်စွက်ဆေးများသည်အလွန်အန္တရာယ်ကင်းကြောင်းသတိပြုပါ။ IV ဆေးကုသမှုကဲ့သို့သင်ရောဂါကူးစက်နိုင်သည့်အန္တရာယ်ရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
အစားအသောက်အစီအစဉ်တွင် dopamine ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် ဦး နှောက်ထဲတွင် NAD ကိုထုတ်လုပ်ရန်ဗီတာမင်ကြွယ်ဝသောအစားအစာများပါဝင်နိုင်သည်။ လူနာအများစုသည်သက်ရောက်မှုခံစားရရန်အကြမ်းအားဖြင့် ၆ ရက်မှ ၁၀ ရက်အထိပြုတ်ရည်လိုအပ်သည်။
ရေရှည်အသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။ အကယ်၍ ဖောက်သည်များကဤကုန်ပစ္စည်းကိုဆက်လက်သုံးစွဲမှသာ NAD တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ Elysium ကျန်းမာရေးအခြေခံ။ ဖြည့်စွက်ချက်အနေနှင့်အခြေခံအားဖြင့်လူသားစားသုံးမှုအတွက်အန္တရာယ်ကင်းသည်။
NAD Anti Aging ဆိုတာဘာလဲ။
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +) သည်သက်ရှိဆဲလ်များအားလုံး၏အခြေခံဇီဝဖြစ်စဉ်များတွင်ပါ ၀ င်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ …အသစ်သောသက်သေအထောက်အထားများအရ NAD + အဆင့်များသည်မြင့်တက်ခြင်းနှင့်အိုမင်းခြင်း၏လက္ခဏာများကိုနှေးကွေးစေခြင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်စေခြင်းနှင့်အသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများ၏တိုးတက်မှုကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
nikotinamide riboside ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကားအဘယ်နည်း။
လူ့လေ့လာမှုများတွင်တစ်နေ့လျှင် ၁၀၀၀ မှ ၂,၀၀၀ မီလီဂရမ်သောက်သုံးခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိသောသက်ရောက်မှုများမရှိခဲ့ပါ။
အချို့လူများသည်ပျို့ချင်ခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ အစာအိမ်အဆင်မပြေခြင်း၊
nikotinamide riboside နှင့် nicotinamide mononucleotide အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။ (၂)
NMN နှင့် NR အကြားအကြီးမားဆုံးနှင့်အထင်ရှားဆုံးခြားနားချက်မှာအရွယ်အစားဖြစ်သည်။ NMN သည် NR ထက်ပိုမိုကြီးမားသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာမကြာခဏဆဲလ်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ အခြား NAD + (နီကိုတင်းအက်ဆစ်သို့မဟုတ်နီကိုတင်းနိုက်ကဲ့သို့) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကထိရောက်မှုသည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။
nikotinamide သည် Nmn နှင့်အတူတူလား?
Nicotinamide riboside နှင့် NMN တို့သည်ဓာတုဗေဒနှင့်တူညီကြသည်။ ဒီလေ့လာမှုကဒီထပ်တိုးဖော့စဖိတ်အုပ်စုသည်ထပ်မံ NMN ကိုဆဲလ်ထဲမ ၀ င်ခင်မှာနီကိုတင်းနိုက်ရောဘိုဆိုဒ်အဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာပြသခဲ့တယ်။
NAD + အဆင့်များသည်အိပ်စက်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောရောဂါများနှင့်ခိုင်မာသောဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ NAD + သည်အိပ်စက်ခြင်းစက်ဝိုင်းနှင့်အသက်နှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများအကြားအချက်အချာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားတိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားများမပြနိုင်ပါ။
Tru Niagen သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဘာလုပ်သနည်း။
Tru Niagen ဆိုတာဘာလဲ ChromaDex မှ Tru Niagen သည်ဆယ်လူလာကြီးထွားမှုနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်မှုအားဖြည့်ခြင်းဖြင့်အိုမင်းခြင်းကိုခုခံတွန်းလှန်ရန်သင့်အားကျန်းမာစေသည့်စွမ်းအင်ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ NAD အဆင့်ကိုမြှင့်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုပြုလုပ်သည်။ သုတေသနပြုချက်အရ NAD သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအာဟာရများနှင့်အစားအစာများကိုစွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသည်၊
Nmn or NAD ကဘာလဲ။
NMN သည် NR ထက်ပိုမိုကြီးမားသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာမကြာခဏဆဲလ်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ NR သည်အခြား NAD + ရှေ့ပြေး (နီကိုတင်းအက်ဆစ်သို့မဟုတ်နီကိုတင်းနိုက်ကဲ့သို့) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ထိရောက်မှုတွင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော် NMN အားတံခါးအသစ်တစ်ခုကို၎င်း၊ ၎င်းမှဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည့်အရာတစ်ခုနှင့်၎င်းသည်ဂိမ်းအသစ်တစ်ခုလုံးကိုပေးသည်။
လေ့လာမှုများအရ NAD + အဆင့်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသည်တဆေး၊ တီကောင်များနှင့်ကြွက်များတွင်သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ တိရိစ္ဆာန်သုတေသနသည် NAD + ၏ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကဏ္improvingများစွာတိုးတက်စေရန်ကတိပေးသည်။ ကြွက်ဟောင်းများရှိမော်လီကျူး၏အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ခြင်းသည် mitochondria - ဆဲလ်၏စွမ်းအင်စက်ရုံများအားပြန်လည်နိုးထလာစေနိုင်ပြီးအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတုန်လှုပ်သွားသည်။
Nad IV ကုထုံးကဘာလဲ။
စွဲပြန်လည်နာလန်ထူရေးနယ်ပယ်တွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဘက်စုံကုသမှုတစ်ခုမှာ NAD IV ကုထုံးဟုခေါ်သည့်အမိုင်နိုအက်ဆစ်ကုထုံးဖြစ်သည်။ Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD) သည်ဇီဝဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာပူးတွဲအင်ဇိုင်းဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ရှိဆဲလ်များအားလုံးကိုတည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၏အရေးကြီးသောအလုပ်ကိုတာဝန်ယူသည်။
NAD boosters ဆိုတာဘာလဲ။
NAD မြှင့်တင်သူများသည်ဗီတာမင် B3 ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သောနီကိုတင်းနိုက်ရောဘိုဆိုဒ်ပါ ၀ င်သည့်ဖြည့်စွက်ဆေးများဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်အနေဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်နီကိုတင်းနိုက်ရောဘိုဆိုဒ်ကို nikotinamide adenine dinucleotide (NAD +) အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသည်။ NAD + သည်ဆဲလ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်သည့် coenzyme ဖြစ်သည်။ အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ NAD + အဆင့်များကျဆင်းလာသည်။
NADH နှင့် NAD + မည်သို့ကွာခြားသနည်း။
အီလက်ထရွန်သယ်ဆောင်သူအဖြစ်၎င်း၏အခန်းကဏ္performကိုလုပ်ဆောင်ရန် NAD သည်ပုံစံ ၂ မျိုးဖြစ်သော NAD + နှင့် NADH ကြားတွင်ပြန်ပြောင်းသွားသည်။ NAD + သည်အစားအစာမော်လီကျူးများမှအီလက်ထရွန်များကိုလက်ခံပြီး NADH သို့ပြောင်းလဲသည်။ NADH သည်အီလက်ထရွန်များကိုအောက်စီဂျင်အဖြစ်လှူဒါန်းပြီး NAD + သို့ပြန်ပြောင်းသည်။
NAD သို့မဟုတ် NMN ကဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ။
NMN သည် NR ထက်ပိုမိုကြီးမားသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာမကြာခဏဆဲလ်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ အခြား NAD + (နီကိုတင်းအက်ဆစ်သို့မဟုတ်နီကိုတင်းနိုက်ကဲ့သို့) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကထိရောက်မှုသည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ … NR သည်ဆဲလ်များထဲသို့အသည်း၊ ကြွက်သားနှင့် ဦး နှောက်တစ်သျှူးများထဲသို့ဝင်ရောက်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
အဘယ်အစားအစာများ nikotinamide မြင့်မားပါသလဲ
ဗီတာမင် B3 ပုံစံနှစ်မျိုးရှိသည်။ ပုံစံတစ်ခုမှာ niacin ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်မျိုးမှာ niacinamide ဖြစ်သည်။ Niacinamide ကိုတဆေး၊ အသား၊ ငါး၊ နို့၊ ကြက်ဥ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ Niacinamide ကိုဗီတာမင် B ရှုပ်ထွေးတဲ့တခြားဖြည့်စွက်ဆေးများမှာလည်းတွေ့ရပါတယ်။
ဆေးဝါးအဖြစ်အသုံးပြုသောနီကိုတင်းနိုက်သည်အရေပြားကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်အကျိုးပြုနိုင်သည်။ Nicotinamide သည်ရောင်ရမ်းခြင်းဆန့်ကျင်သောဂုဏ်သတ္တိများရှိပြီး bullous (အနာဖောင်းနာခြင်း) ရောဂါများကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောလုပ်ဆောင်မှုနှင့် sebum ကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်ဝက်ခြံကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။
အွန်လိုင်းထောက်ခံချက်များအရ niacin ကုထုံးကိုတုန့်ပြန်သောပြင်းထန်သောစိတ်ကျဝေဒနာသည်များသည် ၁၀၀၀ မှ ၃၀၀၀ မီလီဂရမ်မှမည်သည့်နေရာမှမဆိုပိုမိုမြင့်မားသောဆေးပမာဏမှအကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်။ ၂၀၀၈ အာဟာရဆိုင်ရာမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အစားအစာကိစ္စရပ်များအရအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်နေ့စဉ်ဆေးပမာဏ ၁၁၅၀၀ မီလီဂရမ်ဖြင့်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများပြောင်းပြန်လှန်သွားသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်။
ဗီတာမင် B3 ချို့တဲ့ခြင်း၏လက္ခဏာများမှာအဘယ်နည်း။
၀ မ်းလျှောခြင်း၊ ပါးစပ်အနာပေါက်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းနေသည့်အနီရောင်လျှာ၊ လည်ပတ်မှုမကောင်းခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ နေရောင်ခြည်ကိုအလွန်ထိရောက်စွာခံစားနိုင်သည့်အက်ကွဲသောအရေခွံသည်ဗီတာမင် B3 ချို့တဲ့ခြင်းလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။
လေ့ကျင့်ခန်းက NAD ကိုတိုးစေသလား။
နှစ် ဦး စလုံးအတွက် NAD သည်အီလက်ထရွန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွင်းဆက်မှတဆင့် ATP ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်စေရန်အတွက် tricarboxylic acid သံသရာအတွင်း NAD ကို NADH သို့လျှော့ချရန်လိုအပ်သည်။ အမှန်မှာ၊ NAD အဆင့်နှင့်ကြွက်သားအတွင်း NAD salvage enzyme တစ်ခု၏ဖော်ပြမှုသည်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းတိုးများလာကြောင်းပြသသည်။
nikotinamide သည်ဗီတာမင် B3 လား။
niacinamide ဟုလည်းလူသိများသော Nikotinamide သည်ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော amid ပုံစံ niacin (သို့) ဗီတာမင် B3 ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုငါး၊ ကြက်၊ ကြက်ဥနှင့်နှံစားကဲ့သို့သောအစားအစာများတွင်တွေ့ရသည်။ ၎င်းသည်အစားအသောက်ဖြည့်စွက်ဆေးများအဖြစ်လည်းကောင်း၊ နီအိုစင်မဖြည့်သည့်ပုံစံအဖြစ်လည်းရောင်းချသည်။
niacin သည် NAD + အဆင့်တိုးမြင့်သလား။
niacin သည်ဗီတာမင် B3 သည် mitocondrial myopathy ခံစားနေရသောလူနာများ၏ကြွက်သားနှင့်သွေးအတွင်း NAD + အဆင့်များကိုထိရောက်စွာကယ်တင်နိုင်ပြီးရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ကြွက်သားစွမ်းအားကိုတိုးတက်စေသည်။ NAD + အဆင့်သည်ကျန်းမာသောဘာသာရပ်များတွင်လည်းတိုးတက်လာသည်။ သက်သေအထောက်အထားများအရ niacin သည်လူသားများအတွက်ထိရောက်သော NAD + အာနိသင်တိုးမြှင့်သည်။
NAD + ကိုဘယ်လိုယူမလဲ။
NAD + တိုးမြှင့်မှုအတွက် NADH5mg subublingual tablets ကိုယူပါ။ ဂျက်နောက်ကျခြင်းကိုကာကွယ်ရန် NADH 20 mg ကိုသောက်ပါ။ အကောင်းဆုံး NAD + အဆင့်ကိုရောက်ရှိရန် IV Nic-Nicotinamide adenine dinucleotide ပြုတ်ရည်ကိုအပတ်စဉ်သို့မဟုတ်လစဉ်ရယူပါ။
7 sirtuins ဆိုတာဘာလဲ
ဤ“ အပြစ်များ” သည်အိုမင်းခြင်းနှင့်အတူပျံ့နှံ့မှုတိုးပွားစေသည့်သေစေနိုင်သောအခြေအနေခုနစ်ခု (အဝလွန်ခြင်း၊ အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါ၊ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ၊ ကင်ဆာ၊ စိတ်ဖောက်ပြန်မှု၊ အဆစ်နှင့်အရိုးပွရောဂါ) ကိုအထောက်အကူပြုသည်။ sirtuins များသည် NAD + -dependent deacetylases အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးလူသားနှင့်အခြားနို့တိုက်သတ္တဝါခုနစ်ယောက်ပါ ၀ င်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ sirtuins များကိုမည်သို့မြှင့်တင်နိုင်သနည်း။
ထိုကဲ့သို့သောရောဂါများကိုကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်တိုက်ဖျက်ရန်အတွက်မဟာဗျူဟာများထဲတွင်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည် sirtuins ၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်ဖော်ပြမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ ၎င်းသည်ပိုကောင်းသော oxidative metabolism ထိရောက်မှု၊ biogenesis နှင့် mitochondrial function ကိုတိုးစေပြီး antioxidant system ကိုထိန်းသိမ်းသည်။
ဆေးတောင့်ကို ၁ လ၊ ၃ လသို့မဟုတ် ၆ လတိုး။ ဝယ်နိုင်သည်။ ဖောက်သည်များသည်အစားအစာနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲတစ်နေ့လျှင် ၁၅၀ မီလီဂရမ်ဆေးတောင့် ၂ ကိုယူပါ။ ဆေးတောင့်ကိုနံနက်ယံ၌ဖြစ်စေ၊ ညအချိန်တွင်ဖြစ်စေအစားအစာနှင့်ဖြစ်စေ၊
TRU Niagen အလုပ်လုပ်ရန်ဘယ်လောက်ကြာပါသလဲ
ChromaDex မှငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးသောလက်တွေ့လေ့လာမှုများက ၆ ရက်မှ ၈ ပတ်အကြာတွင် NR သည်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ NAD ကိုသွေးစီးဆင်းမှုကိုဘေးကင်းစွာနှင့်ထိရောက်စွာဖြည့်တင်းပေးသည်။ Tru Niagen ကတစ်နေ့လျှင် ၃၀၀ မီလီဂရမ်ကိုရှစ်ပတ်ကြာသောက်သုံးသူများသည် NAD ကို ၄၀ မှ ၅၀% အထိတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်ဟုအထူးပြောဆိုခဲ့သည်။
Tru Niagen ဘယ်နေ့ယူသင့်ပါသလဲ
Tru Niagen ကိုနေ့စဉ်တစ်ချိန်တည်းတွင်သောက်ရန်အကြံပြုသည်။ သင်သည်၎င်းကိုနံနက်ယံ၌ဖြစ်စေ၊ ညအချိန်တွင်ဖြစ်စေအစားအစာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မပါဖြစ်စေစားနိုင်သည်။
Tru Niagen တွင်ပါဝင်ပစ္စည်းများဘာတွေလဲ။
TRU NIAGEN တွင် nikotinamide riboside ပါ ၀ င်ပြီး multivitamin ထုတ်ကုန်များတွင်တွေ့ရသောဗီတာမင် B3 ရင်းမြစ်များနှင့်မတူပါ။ TRU NIAGEN ကိုဆဲလ်များကစုပ်ယူပြီးဗီတာမင်ဖြည့်စွက်ချက်များတွင်တွေ့ရသောဗီတာမင် B3 (niacin, nikotinamide) နှင့်ကွဲပြားသောထူးခြားသောလမ်းကြောင်းဖြင့် NAD သို့ထိရောက်စွာပြောင်းလဲသည်။
niacin နှင့်မတူဘဲ niacinamide သည်ဖလပ်မဖြစ်စေပါ။ သို့သော်နီအိုကင်နိုက်သည်အစာအိမ်စိတ်ဆိုးခြင်း၊ အူသိမ်ဓာတ်ငွေ့၊ မူးဝြေခင်း၊ အဖုအပိန့်ထွက်ခြင်း၊ အရေပြားပေါ်တွင်အသုံးပြုပါကနီယီနင်မိုင်းဒ်အသားသည်နူးညံ့သောမီးလောင်ခြင်း၊ ယားယံခြင်းသို့မဟုတ်နီခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
ရောနှောခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Niacinamide နှင့် Vitamin C. သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည် antioxidants ဖြစ်သော်လည်း vitamin C သည် niacinamide နှင့်မကိုက်ညီပါ။ ဒေါက်တာ Marchbein က“ ဒီပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးဟာအသားအရေထိန်းသိမ်းပစ္စည်းထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးမှာသုံးကြတဲ့ antioxidants တွေဖြစ်ပေမယ့်နောက်တစ်ခုကိုမသုံးသင့်ပါဘူး” ဟုဒေါက်တာ Marchbein ကဆိုသည်။
မျက်နှာပေါ်မှာ niacinamide အရမ်းသုံးလို့ရလား။
မြင့်မားသောပါဝင်မှုများ၌အသုံးပြုပါကနီကိုင်းနိုက်သည်အရေပြားယားယံခြင်းနှင့်နီခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ Niacinamide နဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုမကောင်းတဲ့တုန့်ပြန်တဲ့ကံမကောင်းတဲ့လူနည်းစုထဲမှာသင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဓိကဖြစ်နိုင်ခြေသုံးခုရှိပါတယ်။ သင်ဟာဓါတ်မတည့်တာ၊ စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်စေတဲ့အခြားပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခု၊
niacinamide 1000 mg သည်ဘေးကင်းပါသလား။
ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်လူကြီးများသည်တစ်နေ့လျှင် ၃၅ မီလီဂရမ်ထက်ပိုသောဆေးများအား niacinamide ကိုမသောက်သုံးသင့်ပါ။ niacinamide တစ်နေ့လျှင် ၃ ဂရမ်အထက်ဆေးများကိုသောက်သုံးပါကပိုမိုလေးနက်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ ယင်းတို့တွင်အသည်းပြproblemsနာများသို့မဟုတ်သွေးတွင်းသကြားဓာတ်များပါဝင်သည်။
Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်သောက်ဆေး
ယခုအထိပြုလုပ်ခဲ့သည့်လေ့လာမှုငါးခုအရ Nicotinamide Riboside သည်လူသားတို့အတွက်လုံခြုံမှုရှိသည်။ သို့သော်ဤလေ့လာမှုများသည်လူသားများအတွက်တစ်နေ့လျှင် ၁၀၀၀ မှ ၂၀၀၀ မီလီဂရမ်အကြားအန္တရာယ်ကင်းစွာ Nicotinamide Riboside Chloridedosage ကန့်သတ်ချက်ကိုသတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။ သို့သော်၊ နီကိုတင်မိုင်ရီဘိုစိုင်ဒီဒ၏လုံခြုံမှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာသည့်လေ့လာမှုအားလုံးသည်အလွန်သေးငယ်သောနမူနာအရွယ်အစားရှိသဖြင့်ဤဒေသတွင်နောက်ထပ်သုတေသနပြုမှုများလိုအပ်ကြောင်းသတိရသင့်သည်။
Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ Nicotinamide Riboside Chloride သို့မဟုတ် Niagen ကိုကိုယ်ခန္ဓာအားမရှိမဖြစ်ထောက်ပံ့ပေးရန်ဖြစ်သည်။ Niagen သို့မဟုတ် NR ကိုများသောအားဖြင့်ပုံစံနှင့်ဆေးပြားနှစ်မျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ များစွာသော Nicotinamide Riboside ဖြည့်စွက်ထုတ်လုပ်သူများပေါင်းစပ်ကြသည် NR ထိုကဲ့သို့သော Pterostilbene ကဲ့သို့သောအခြားဓာတုပစ္စည်းများနှင့်အတူ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဘေးကင်းရန်၊ ဖြည့်စွက်ထုတ်လုပ်သူအများစုသည်နေ့စဉ် NR ပမာဏကိုတစ်နေ့လျှင် ၂၅၀ မှ ၃၀၀ မီလီဂရမ်ကြားတွင်ထားရှိရန်အကြံပြုသည်။
① Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်သည်ကျန်းမာသောအိုမင်းခြင်းကိုအားပေးသည်
ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ Nicotinamide Riboside Chloride မှ activate NAD + သည်ကျန်းမာသောအိုမင်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောသီးခြားအင်ဇိုင်းများကိုသက်ဝင်စေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအင်ဇိုင်းတစ်ခုမှာ sirtuins ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တိရိစ္ဆာန်များ၏ဘ ၀ တိုးတက်မှုနှင့်သက်တမ်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများအရ sirtuins များသည်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျှော့ချခြင်း၊ ကယ်လိုရီကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ပျက်စီးသည့် DNA ကိုပြုပြင်ခြင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အသက်တာ၏အရည်အသွေးနှင့်သက်တမ်းကိုတိုးတက်စေကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ Nicotinamide Riboside Chloride မှ activated NAD + သည်ပျက်စီးနေသော DNA ကိုပြုပြင်ပေးသော Poly polymerases များကိုလည်းလုပ်သည်။ ထို့အပြင်သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုအများအပြားသည်ပိုလီမာရစ်စ်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုသက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ထားသည်။
② ၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏နှလုံးရောဂါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခွင့်အလမ်းများကိုလျှော့ချပေးသည်
အိုမင်းခြင်းဟာနှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေပါတယ်။ လူတို့သည်အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှသူတို့၏သွေးကြောများသည်ပိုထူလာပြီးတင်းကျပ်လာကာသွေးပေါင်ချိန်တိုးလာသည်။ သွေးကြောများအတွင်းရှိသွေးပေါင်ချိန်တိုးများလာသည်နှင့်အမျှနှလုံးသွေးကြောပိတ်ဆို့ရန်နှလုံးသည်နှစ်ဆ ပို၍ အလုပ်လုပ်ရပြီးနှလုံးရောဂါအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Nicotinamide Riboside Chloride မှပေးသော NAD + သည်သွေးကြောများသို့အသက်အရွယ်နှင့်ဆက်နွယ်သောပြောင်းလဲမှုများကိုပြောင်းပြန်ပြောင်းသည်။ Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD +) သည်သွေးကြောများတောင့်တင်းမှုကိုလျော့နည်းစေရုံသာမကနှလုံးသွေးကြောကျဉ်းမှုကိုလည်းထိန်းညှိနိုင်ကြောင်းသက်သေပြရန်သိပ္ပံနည်းကျအထောက်အထားများစွာရှိသည်။
③ Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်သည် ဦး နှောက်ဆဲလ်များကိုလည်းကာကွယ်ပေးသည်
Nicotinamide Riboside သည် ဦး နှောက်ဆဲလ်များကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ကြွက်များအပေါ်ပြုလုပ်သောလေ့လာမှုတစ်ခုအရ NAD မှထုတ်လုပ်သည့် NAD + ထုတ်လုပ်မှုသည် PGC-1 alpha protein ထုတ်လုပ်မှုကို ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးတက်စေခဲ့သည်။ PGC-50 alpha protein သည် ဦး နှောက်ဆဲလ်များကို oxidative stress မှကာကွယ်ပေးပြီး mitochondrial function ကိုလည်းတိုးတက်စေသည်။ ထို့ကြောင့်လူသားများတွင် NR စားသုံးမှုသည်အယ်ဇိုင်းမားနှင့်ပါကင်ဆန်ကဲ့သို့သောအသက်အရွယ်ကြောင့် ဦး နှောက်ရောဂါများမှကာကွယ်ပေးသည်။ အထူးလေ့လာမှုတစ်ခုက NAD + အဆင့်ဟာပါကင်ဆန်ရောဂါခံစားနေရတဲ့လူတွေအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုလေ့လာခဲ့တယ်။ အဆိုပါလေ့လာမှုက NAD + သည်ပင်မဆဲလ်များမှ mitochondrial function ကိုတိုးတက်စေသည်ဟုကောက်ချက်ချခဲ့သည်။
④ Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်၏အခြားသောအဓိကအကျိုးကျေးဇူးများ
အထက်တွင်ဆွေးနွေးထားသောအကျိုးကျေးဇူးများအပြင်အခြားဤနေရာတွင် Nicotinamide Riboside Chloride နှင့်ဆက်စပ်သောနောက်ထပ်အကျိုးခံစားခွင့်များရှိပါသည်။
NR သည်ကြွက်သားသန်စွမ်းမှု၊ လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ခံနိုင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်လူသိများသောကြောင့် NR စားသုံးမှုသည်အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
အထက်တွင်ဆွေးနွေးထားသည့်အတိုင်း NAD + ထုတ်လုပ်မှု NR မှထုတ်လုပ်မှုသည်ပျက်စီးနေသော DNA ကိုပြုပြင်ပေးပြီး oxidative stress ကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ယင်းကကင်ဆာရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျော့နည်းစေသည်။
လေ့လာမှုတစ်ခုအရ Nicotinamide Riboside သည်ကြွက်များတွင်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ လေ့လာမှုက NR သည်ကြွက်များတွင်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုတိုးပွားလာသည်ဟုကောက်ချက်ချခဲ့သည် ၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ သိပ္ပံနည်းကျအထောက်အထားပိုမိုလိုအပ်သော်လည်းသိပ္ပံပညာရှင်များက Nicotinamide Riboside သည်လူသားများအပေါ်အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမည်ဟုယူဆပြီးကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
Bulk တွင် Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်အဘယ်မှာဝယ်ရမည်နည်း။
Nicotinamide Riboside ဖြည့်စွက်ဆေးများဝယ်လိုအားသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းသိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့ပြီးအဓိကအားဖြင့် Nicotinamide Riboside တွင်အားသာချက်များစွာရှိသည်။ သင် Nicotinamide Riboside ဖြည့်စွက်စျေးကွက်သို့ဝင်ရောက်ရန်ရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်၊ သင်လုပ်ရမည့်အချက်မှာသင်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်ကြမ်းကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။ ဘယ်မှာလဲ Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်အမှုန့်ကိုဝယ်ပါ အမြောက်အများရှိပါသလား အဖြေကတော့ Cofttek ပါ။
Cofttek ကုန်ကြမ်းကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီးဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်အကြာတွင်ကုမ္ပဏီသည်နိုင်ငံအတော်များများတွင် ၄ င်း၏တည်ရှိမှုကိုထူထောင်ခဲ့သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်သည့်အပြင်ကုမ္ပဏီသည်ဇီဝနည်းပညာ၊ ဓာတုနည်းပညာနှင့်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများတွင်တိုးတက်မှုများပြုလုပ်ရန်လည်းအာရုံစိုက်သည်။ ကုမ္ပဏီသည်စျေးကွက်ရှိအခြားကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများထက်သာလွန်သည့်အရည်အသွေးရှိသောသုတေသနကိုပြုလုပ်ရန်ကတိကဝတ်ပြုထားသည်။ ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သော Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်အမှုန့်သည် ၂၅ ကီလိုဂရမ်အသုံပြုပြီးအရည်အသွေးအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီတွင်အရောင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအတော်များများသည်သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်မေးမြန်းမှုများအားလုံးကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီဂရုစိုက်ပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင် Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်အမှုန့်ကိုအမြောက်အများဝယ်လိုပါက Cofttek သို့ဆက်သွယ်ပါ။
(1) ။Conze, D. , Brenner, C. & Kruger, NIAGEN (Nicotinamide Riboside Chloride) ၏ရေရှည်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ CL ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှု၊ ကျပန်း၊ မျက်မမြင်၊ ရလဒ်များအရသွေးပေါင်ချိန်ထိန်းချုပ်ထားသောကျန်းမာရေးအဝလွန်လူကြီးများ။ သိပ္ပံကိုယ်စားလှယ်9, 9772 (2019)
(2) ။Julian Mevenkamp၊ လူးကပ်စ် Lindeboom၊ Vera HW de Wit၊ Tineke van de Weijer၊ Suzanne ABM Aarts၊ Esther Lutgens, Bauke V Schomaker, Hyung L Elfrink, Carlijn ME Remie, Kay HM Roumans, Michiel PB Moonen, Niels J Connell, Bas Havekes, Ruben Zapata-Pérez, Riekelt H Houtkooper, Johan Auwerx, Joris Hoeks, Vera B Schrauwen-Hinderling, Esther Phielix, ပက်ထရစ် Schrauwen, Nicotinamide riboside ဖြည့်စွက်ကျန်းမာသောအဝလွန်လူသားများတွင်ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အရိုးကြွက်သား acetylcarnitine ပြင်းအား, လက်တွေ့အာဟာရ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်, အတွဲ 112, ပြIssueနာ 2, သြဂုတ် 2020, စာမျက်နှာ 413-426
(3) .Elhassan, YS, Kluckova, K. , ဖလက်ချာ, RS, Schmidt က, MS, Garten, အေ, Doig, CL, Cartwright, DM, Oakey, အယ်လ်, Burley, CV ကို, Jenkinson, N. , Wilson က, အမ်လူးကပ်စ်၊ အက်စ်၊ အာကီမန်၊ ဗြဲ၊ ) ။ Nicotinamide Riboside သည်သက်ရှိလူသားအရိုးကြွက်သား NAD + Metabolome ကိုတိုးစေပြီး Transcriptomic နှင့် Anti-inflammatory Signatures များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ cell အစီရင်ခံစာများ, 28(7), 1717-1728.e6 ။
(4) ။Nicotinamide riboside ကလိုရိုက်အမှုန့်
(5) ။egt စူးစမ်းလေ့လာရန်ခရီး။
(6) ။Oleoylethanolamide (oea) - သင့်ဘ ၀ ရဲ့မှော်အရိပ်။
(7) ။Anandamide vs cbd: ဘယ်ကျန်းမာရေးကပိုကောင်းတာလဲ။ သူတို့ကိုသင်သိထားသင့်သမျှ
(9) ။Palmitoylethanolamide (ပဲ): အကျိုးကျေးဇူးများ, သောက်သုံးသော, အသုံးပြုမှု, ဖြည့်စွက်။
(10) ။resveratrol ဖြည့်စွက်၏ထိပ်တန်းကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကို6။
(11) ။phosphatidylserine (ps) ကိုသောက်ခြင်း၏အကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများ။
(12) ။pyrroloquinoline quinone (pqq) ကိုသောက်ခြင်း၏အကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများ။
(13) ။alpha gpc ၏အကောင်းဆုံး nootropic ဖြည့်စွက်။
(14) ။Nikotinamide mononucleotide (nmn) ၏အိုမင်းခြင်းကိုခံသောအကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်ချက်။
ယခုလက်ရှိအိုမင်းခြင်းကိုနှေးကွေးရန်လက်ရှိဆေးများအကြောင်းလေ့လာပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်လေ့လာသိရှိခဲ့ရာများမှာ ၁။ Nicotinamide riboside - NAD အဆင့် ၂။ MitoQ, C1oo, PQQ - Mitochondrial antioxidants 2. Quercetin - Senolitics 60. Carnosine - AGE breaker အားလုံးအိုမင်းခြင်းကိုနှေးကွေးစေမသေချာသော်လည်းလူများက၎င်းကိုစမ်းသပ်နေကြသည်။
ငါ့အရေပြားနှင့် ပတ်သက်၍ NR ဖြည့်စွက်ဆေးသည်ခြောက်သွေ့စေရန်အထူးသဖြင့်ဆောင်းရာသီတွင်ခြေထောက်များခြောက်သွေ့စေသည်။
NAD + သည်ရေတွင်ပြိုကွဲသွားပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာအခန်းအပူချိန်ကျော်သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဖြစ်သည်။
သင်ရရှိသောအချိန်တွင်၎င်းသည်သုညသို့ယိုယွင်းသွားသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့သည် NR နှင့် NMN ကဲ့သို့ရှေ့ပြေးနမူနာများကိုယူပြီး၎င်းတို့သည်တရားဝင် NAD + boosters များဖြစ်သည်။
သင်မည်သည့်နေရာသို့သွားရန်ဆုံးဖြတ်သည်ဖြစ်စေ၊ 1g တွင်မစတင်ပါနှင့်။ အနိမ့်ဆေးထိုးမှစတင်ပါနှင့်သင်မည်သို့စတင်ဘယ်လိုကြည့်ပါ။
Nicotinamide Riboside သည်အလွန်တည်ငြိမ်မှုမရှိပါ။
သင်ရရှိသောအချိန်ကာလအားဖြင့်၎င်းသည်များသောအားဖြင့် NAM သို့ယုတ်ညံ့သွားလိမ့်မည်။
သို့သော်သင် ၀ ယ်နိုင်သည့်ပစ္စည်းအားလုံးနီးပါးသည် NR Chloride ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်စိုစွတ်မှုမရှိသရွေ့တည်ငြိမ်သည် (Sinclair ပြောကြားခဲ့သည့်အချက်အလက်များအရ၎င်းကိုအချက်အလက်များဖြင့်သက်သေပြနိုင်သည်) ။ NR ကလိုရိုက်၏ကလိုရိုက်အပိုင်းသည်အခြေခံအားဖြင့်တည်ငြိမ်ရုံမျှသာဖြစ်ပြီး NR ကလိုရိုက်သည်အရည် (ခန္ဓာကိုယ်အစာအိမ်ကဲ့သို့) ထိမှန်သည်နှင့်ကလိုရိုက်အစိတ်အပိုင်းကွဲသွားပြီး NR ထွက်လာသည်။
NR သည် NMN ၏ရှေ့ပြေးဖြစ်ပြီး၊ NMN သည် NAD + ၏ရှေ့ပြေးဖြစ်သည်။
ဤ nr nampt nmn nad sirt1 crap တစ်ခုလုံးသည်ကျွန်ုပ်ကိုရှုပ်ထွေးစေသည်။ သို့သော်ငါစုဆောင်းနိုင်သည့်အချက်အနေဖြင့် nr အဆီဆဲလ်များနှင့် beta islet ဆဲလ်များ၌တီ့ဒ်က nmn အဖြစ်ပြောင်းလဲသည်။ အင်ဆူလင်၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်။
Niagen သည်တည်ငြိမ်သော၊ ကြာရှည်သောသက်တမ်းရှိပြီးရေခဲသေတ္တာတွင်မထားရန် NR-CL ဖြစ်သည်။ ငါဘယ်သူ့ကိုမှသန့်ရှင်းတဲ့ NR ရောင်းတယ်လို့မထင်ဘူး
၁၀ ပတ်ကြာ NR ဖြည့်စွက်ဆေးကိုကောင်းစွာသည်းခံနိုင်ခဲ့ပြီး MCI နှင့်အတူသက်ကြီးရွယ်အိုများ၏သွေးထဲတွင် NAD (+) နှင့်ဆက်စပ်သော metabolites များပြားလာသည်။ NR သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကနှင့်အလယ်ရလဒ်ရလဒ်များ fMRI နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေခဲ့သည်။ သို့သော်ဤသေးငယ်သောရှေ့ပြေးလေ့လာမှုတွင်သိမြင်မှုကွဲပြားခြားနားမှုများမအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များသည် MCI ရှိသက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လုပ်ဆောင်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့် NR ကိုနောက်ထပ်စစ်ဆေးခြင်းအတွက်အထောက်အကူပြုသောအထောက်အထားများကိုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်သည်andһѕ post c ߋကိုနောက်ဆုံးတွင်ခေတ်မီနည်းပညာများနှင့်ဆင်တူသောပုံနှင့်စပ်လျဉ်း။ ထူးခြားသည့်ဆောင်းပါးဖြစ်သည်။
အသက် ၂၆ နှစ်သာရှိသေးပြီးအသက် ၂၅ နှစ်မှာ NR / NAD + ကိုစတင်ပြီးနောက်၊ ၁၃ နှစ်အရွယ်မှာငါလုပ်ခဲ့သည့်စွမ်းအင်ရှိပြီး၊ အသက်လည်းတဖန်ပြန်လာပြီ၊ ငါ့လေ့ကျင့်ခန်းနာကျင်မှုကအများကြီးပိုမြန်မြန်မြန်သည်။